Ulwembu lweChina kwezomnotho luqaqele umhlaba | Bayede News
Home/ Ipolitiki/Ulwembu lweChina kwezomnotho luqaqele umhlaba
Ulwembu lweChina kwezomnotho luqaqele umhlaba
LUBONAKALA luphumelela ngamalengiso uhlelo lukaHulumeni waseChina lokuba nomthelela kwezomnotho kuwona wonke amazwe omhlaba olubizwa ngeBelt and Road Initiative. Lolu hlelo olwaqala ukumenyezelwa uMengameli wePeoples Republic of China uMnu uXi Jinping ngowezi-2013 luhlose ukuqinisa amaxhama okuhwebelana ngokomnotho namazwe omhlaba. Nakuba lolu hlelo lwaqala ngokungenelela kakhulu emazweni angenalo uzinzo kwezomnotho, kodwa muva nje kubonakala lokhu kuguquka njengoba namazwe ahamba phambili kwezomnotho eseba yingxenye yalo. Lolu hlelo seluthele izithelo ezinhle njengoba asemaningi amazwe azithola esephila emuseni weChina.
NgoMandulo wanyakenye iFace2Face Africa yaveza ukuthi iZambia isengcupheni yokugwinywa iChina emva kokuboleka imali eseyehluleka ukuyikhokha. Ngokocwaningo lwe-Africa Confidential iZambia iyehluleka ukukhokha izigidigidi zemali eyaziboleka eChina, okungakho kunezigxoxo phakathi kwabaholi bala mazwe zokunikezela ngenkampani kagesi iZESCO yaseZambia kuChina. Le nkampani ingenkulu ukunazo zonke eZambia njengoba ihlinzeka ugesi kubantu abangama-80%. Akugcini ngale nkampani kagesi ngokwalo mbiko uphinde uveze nokuthi iLusaka International Airport nayo ingase ibe sezandleni zeChina ngoba ayibonakali indlela engazikhokha ngayo izikweletu zayo iZambia. Uma lokhu kugcina ngokwenzeka iyobe ingaqali iChina ukuzitapela emnothweni waseZambia njengoba ngowezi-2017 iZambia yanikeza iChina ingxenye engama-60% yesikhumulo sethelevishini nomsakazo iZambia National Broadcasting Corporation (ZNBC). Nakuba ingene ngomkhono nesiphanga iChina emnothweni waseZambia njengoba nezimayini eziningi zingaphansi kwesandla sayo, kodwa akuyona yona enale nkinga njengoba uxhaxha lwamazwe seluphila ngomusa weChina.
Ngowezi-2010 iSri Lanka yathatha isikweletu esingaphezu kwesigidigidi samadola eChina ngenhloso yokwakha isikhumulo semikhumbi edolobheni iHambantota. Lesi sikhumulo asithelanga izithelo zomnotho ezazilindelwe okwacacisela iSri Lanka ukuthi ngeke ikwazi ukukhokha isikweletu sayo okwabe sekuyiphoqa ukuthi isiboleke iChina iminyaka engama-99. Ngalezi zindaba zokudliwa kwesikhumulo semikhumbi iqembu eliphikisayo iTamil National Alliance lakhipha isitatimende esexwayisa ngeqhinga leChina lokusebenzisa izikweletu ukungenelela kwezombusazwe waseSri Lanka.
Ngowezi-2017 owayenguNdunankulu waseAustralia uMnu uMalcolm Turnbull wathi iChina isiphenduke isitha ku-Australia njengoba; “imibiko yabezindaba iveza ukuthi iChinese Communist Party isebenza ngokuzikhandla emzamweni yawo yokulawula abezindaba bethu, izikhungo zemfundo ephakeme kanye nezinqumo zokuthi obani abazongena ePhalamende”. Zili-12 kuZibandlela wezi-2017 uMnu uSam Dastyari owayeyilungu lePhalamende ngaphansi kweqembu i-Australian Labor Party waphoqwa ukuthi ahoxe ePhalamende ngezinsolo zokuthi ufumbathiswe yiChina ukuze izinkulumo zakhe ziyibeke kahle. I-Australia ikuthola kunzima ukuthatha izinyathelo ngeChina njengoba oyedwa kwabangama-20 engowokudabuka eChina iningi labo okungabadla elikapondo okubenza babaluleke kakhulu emnothweni wase-Australia.
UMengameli wase-USA uDonald Trump waqala impi yokuhwebelana ngokomnotho neChina ngoLwezi wanyakenye ngesikhathi ethi uzokwethula intela engama-25% ezimpahleni ezivela eChina ngoba usekhathele ukudlala iChina ezenzela umathanda ezinkampanini zase-USA eziseChina ekubeni kungenziwa okufanayo kwezayo ezise-USA. UTrump wathembisa ukuyitakula i-USA ekubeni isigqila seChina ngokuhwebelana waze wabeka umnqamulajuqu wosuku lokuqala kuNdasa wakulo nyaka njengokuzoqala khona uhlelo lokufakwa kwentela ezimpahleni ezivela eChina. Emasontweni amabili edlule uselulile lesi sikhathi njengoba kunezingxoxo phakathi kwala mazwe osomnotho bexwayisa ngengozi yokuqala impi yokuhwebelana neChina, okuyiveza njengelinye lamazwe angaphansi kolwembu lweChina i-USA.
Amanye amazwe anjengoNigeria, i-Angola, iKenya, iPakistan kanye namanye amaningi aseqalile afunda ulimi lwaseChina isiMandarin ukuze axhumane kangcono neChina. Lokhu kuqhubeka nokufakazela ukuthi maningi amazwe angaphansi kolwembu lweChina.
Liza mawala igagasi lemibhikisho ku-Ortega